Posted by ကိုမျိုး at 6:22 PM No comments: Links to this post
Posted by ကိုမျိုး at 4:18 PM No comments: Links to this post
Posted by ကိုမျိုး at 3:27 PM No comments: Links to this post
Posted by ကိုမျိုး at 3:26 PM No comments: Links to this post
Posted by ကိုမျိုး at 3:25 PM No comments: Links to this post
Posted by ကိုမျိုး at 3:24 PM No comments: Links to this post
(၅) သားစဉ်မြေးဆက် အဆက်ဆက် မိတ်ဝတ်မပျက်ဘဲ ပေးကမ်းချီးမြှင့်ရခြင်း။
Posted by ကိုမျိုး at 3:23 PM No comments: Links to this post
ညီညာထကြွ၊ ဆုံးမနာယူ၊ လာမူကြိုဆီး၊ ထံနှီး. လုပ်ကျွေး၊ သင်တွေးအံရွတ်၊ တပည့်ဝတ်၊ မချွတ် ငါးခုသာ။
Posted by ကိုမျိုး at 3:22 PM No comments: Links to this post
အတတ်လည်းသင်၊ ပဲ့ပြင်ဆုံးမ၊ သိပ္ပမချန်၊ ဘေးရန်ဆီးကာ၊ သင့်ရာအပ်ဖို့၊ ဆရာတို့၊ ကျင့်ဖို့ ၀တ်ငါးဖြာ။
Posted by ကိုမျိုး at 3:20 PM No comments: Links to this post
(၅) မိဘတို့၏ မျိုးနွယ် အမျိုး ဘာသာ သာသနာကို စောင့်ရှောက်ရခြင်း။
Posted by ကိုမျိုး at 3:18 PM No comments: Links to this post
(၅) လက်ထပ်ထိမ်းမြား ပေးရခြင်း၊
Posted by ကိုမျိုး at 3:16 PM No comments: Links to this post
ဘုရားအပွင့် နည်းပါးလှပုံ။ ။ ကမ္ဘာတိုင်းဘုရားပွင့်သည်မဟုတ်၊ ကမ္ဘာများစွာကြာမှဘုရားတစ်ဆူသာပွင့်သော ကမ္ဘာရှိတက်သည်။ တခါတလေ ကမ္ဘာပေါင်း သိန်း၊ သန်း၊ကုဋေ၊ အသင်္ချေကြာမှ ဘုရားပွင့်သောကမ္ဘာရှိတက်သည်။ ထို့ကြောင့် ပွင့်ပြီးသောဘုရား အရေအတွက်ထက် ကမ္ဘာအရေအတွက်က သိန်း၊ သန်း၊ ကုဋေမက များလှပေပြီ မှတ်ယူအပ်၏။ ပွင့်တော်မူပြီးသော ဘုရားအရေအတွက်မှာ ယူဇနာပေါင်း ၅၀၀ ရှည်လျားသော ဂင်္ဂါမြစ်ထဲ သဲစုမက ပွင့်တော်မူခဲ့ကြပြီး ဖြစ်သဖြင့် ပျက်ပြီးသော ကမ္ဘာအရေအတွက်ကလည်း ဘုရားများထက် သိန်း၊ သန်း၊ ကုဋေများခဲလှပေပြီဟု သိအပ်ပေသည်။
တဏှင်္ကရာဘုရားမှစ၍ ဂေါတမဘုရားအထိ နှစ်ကျိပ်ရှစ်ဆူသော ဘုရားပေါင်းတွင် တဏှင်္ကရာ၊ မေဓင်္ကရာ၊ သရဏင်္ကရာ၊ ဒီပင်္ကရာဟု ဘုရားလေးဆူရှိရာ ဒီပင်္ကရာဘုရား လက်ထက်တော်တွင် အလောင်းတော်သည် သုမေဓာရှင်ရသေ့ဘဝတွင် ဂေါတမဘုရား အလောင်းတော်ဟု နိယတဗျာဒိတ်တော် ရခဲ့သည်ကစ၍ ယခုဘဒ္ဒကမ္ဘာအထိ အလောင်းတော်သည် လေးအသင်္ချေနှင့် ကမ္ဘာတသိန်းမျှ ပါရမီတော်ဖြည့်တော်မူရသဖြင့် ထိုနှစ်ကျိပ်ရှစ်ဆူသော ဘုရားများတွင် ဘဒ္ဒကမ္ဘာ၌ ဘုရားလေးဆူပွင့်တော်မူပြီးသဖြင့် ပဌမဘုရားလေးဆူနှင့် ပေါင်းသော် ဘုရားရှစ်ဆူဖြစ်၏။
ဒီပင်္ကရာဘုရားမှ ဘဒ္ဒကမ္ဘာထိ စပ်ကြားတွင် ကမ္ဘာလေးသင်္ချေနှင့် တသိန်းအကြားမှာ ကျန်ဘုရားအဆူနှစ်ဆယ် ပွင့်တော်မူကြ၏။ ၎င်းးလေးသင်္ချေနှင့် ကမ္ဘာတသိန်းကိုတည်၍ ဘုရားအဆူနှစ်ဆယ်နှင့် စားသော် ရလဒ်အသင်္ချေပင်ရှိ၏။ အဘယ်ကြောင့်ဟူမူ ယခုခေါ်သော အသင်္ချေမျိုးကာ ရေတွက်မရသော အသင်္ချေမျိုးဖြစ်သောကြောင့်တည်း။ (ဥပမာ ) ယူဇနာပေါင်း ၅၀၀- ရှည်သော ဂင်္ဂါမြစ်တွင်းရှိသဲတို့ကို ၁၀၀ နှင့်စားလဲ လဒ်အသင်္ချေ၊ အသင်္ချေနှင့်စားလဲ လဒ်အသင်္ချေသာ ရသောကြောင့်တည်း။ ဤသို့လျှင် ဂဏန်းအရေအတွက် မခေါ်တက်နိုင် လောက်အောင် များပြားလှ၏။ ထိုဂဏန်းအရေအတွက်သည် ဘုရားဆူရေနှစ်ဆယ်တွင် တပါးနှင့်တပါး ခြားကွာသော ပျမ်းမျှခြင်း ဘုရားမပါသော ကမ္ဘာအရေအတွက်ဟု သိမှတ်ရာ၏။
ထို့ကြောင့် ကမ္ဘာတိုင်းဘုရားမပွင့်ဘဲ တသင်္ချေ၊ တသင်္ချေအားဖြင့် ကမ္ဘာပေါင်းများစွာကြာမှ ဘုရားပွင့်သော ကမ္ဘာပေါ်လာရကြောင်း ထင်ရှားစွာ သိအပ်လှပေသည်။ ကမ္ဘနိယာမ ဓမ္မတာသဘောအတိုင်း ကမ္ဘာတခါ ပျက်လျှင် မည်သည့်သတ္တဝါမဆို ဗြဟ္မာတခါ ဖြစ်စမြဲပေတည်း။ အပါယ်လေးဘုံ၌ ဖြစ်ပေါ်နေသော သတ္တဝါများပင် ကျွှတ်လွတ်၍ လူ့ပြည်မှတဆင့် သမထတရား၊ ဈာန်တရားများကို အားထုတ်ရပြီးသော် ဗြဟ္မာပြည်တွင် ဖြစ်ပေါ်ရစမြဲ ဓမ္မတာပေတည်း။ ငရဲသူ၊ ငရဲသားများပင် ဗြဟ္မာဘုံသို့ ရောက်ကြရသည် ဆိုရငြားသော်လည်း အယူမှားလွန်း၍ နိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတမျိုးဖြင့် ငရဲသို့ကျရောက်သူတို့မှာ ထိုအယူကို မစွန့်သေးက ကမ္ဘာပင်ပျက်သော်လည်း ဗြဟ္မာဖြစ်ခွင့်မရဘဲ မပျက်သေးသော အခြားစကြာဝဠာကမ္ဘာက ငရဲသို့ ပြောင်းရွှေခံကြရပေသည်။ ၎င်းနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ သည် သုံးမျိုးရှိ၏။ ၎င်းတို့သည်ကား…
၂။အကျိုးမရှိဟုယူသော (ဝါ) ကံ၊ ကံ၏အကျိုးကို ပစ်ပယ်သော နတ္ထိကဒိဋ္ဌိ
၃။အကြောင်း၊ အကျိုးနှစ်ပါး မရှိဟူသော အကိရိယဒိဋ္ဌိ ဟူ၍ နိယတ မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကြီး သုံးမျိုးရှိ၏။
ဘုရားမပွင့်သော ကမ္ဘာက သင်္ချေ၊ သင်္ချာမက ပိုမိုများပြားလှသဖြင့် ဘုရားမပွင့်သော အဗုဒ္ဓကာလများမှာ သတ္တဝါတို့ မည်ကဲ့သို့ ကုသိုလ်တရားကို အားထုတ်၍ သံသရာတွင် ဘဝကောင်းများရကြရန် ကြိုးစားကြရသနည်းဆိုလျှင် ကာမဘုံ၊ ရူပဘုံ၊ အရူပဘုံဟု ဆိုအပ်သော သုံးပါး၌ အဖြစ်များကြရလေအောင် အားထုတ် ကြိုးစာကြသင့်ကြောင်း ရေးသားဖော်ပြလိုက်ရပါသည်။
Posted by ကိုမျိုး at 7:25 PM No comments: Links to this post
Posted by ကိုမျိုး at 7:15 PM No comments: Links to this post
ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ကြီးများ၏ ဓမ္မအလင်္ကာများ အပိုင်း (၄)
Posted by ကိုမျိုး at 2:31 PM No comments: Links to this post
လောက၌ စန္ဒကူပင်သည် ခြောက်သွေ့သော်လည်း အနံ့ကိုမစွန့်။ ဆင်ပြောင်သည် စစ်မြေပြင်
သို့ရောက်သော်လည်း လူတို့၏မျက်မှောက်၌ တင့်တယ်ခြင်းကိုမစွန့်။ ကြံသည် ယန္တယားစက်၏ အ၀သို့
ရောက်သော်လည်း ချိုသောအရသာကို မစွန့်။ ပညာရှိသူတော်ကောင်းသည် ဆင်းရဲခြင်းသို့ရောက်သော်
လည်း သူတော်ကောင်းတရားကို မစွန့်သည်သာတည်း။
ပန်းတိုင် SMART Goals
ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကို အောက်ပါ (၅) ချက်ဖြင့် ရှင်းလင်းပါရစေ -
၁။ S = သင်အလိုရှိရာအပေါ်မှာ တစ်သီးတစ်သန့် Specific ဖြစ်ပါစေ။
၂။ M = ဖြစ်ထွန်းလာမည့်ရလဒ်များကို တိုင်းတာနိုင် Measure သည်ဆိုတာ သေချာပါစေ။
၃။ A = သင်၏ပန်းတိုင်သည် ရနိုင်၊ ရောက်နိုင်၊ ဆွတ်ခူးနိုင်သည် Achieveable ဟုစွဲမြဲထားရမည်။
၄။ R = သင်၏ ပန်းတိုင်သည် စီလျော်ဆက်စပ် Relevant ရမည်။
၅။ T = Time အချိန်ကိုက် လုပ်ဆောင်ရမည်။ ဘယ်အချိန် ဘယ်အခါမှာ ဘယ်ပန်းတိုင်ဆွတ်ခူးပြီးဖြစ်ရမည်။
Posted by ကိုမျိုး at 6:15 PM No comments: Links to this post
Posted by ကိုမျိုး at 4:45 PM No comments: Links to this post
လောကမှာငွေရှိရင် ဘာမဆိုဖြစ်တယ်လို့ ထင်နေကြသူတွေအတွက်…
1. ပိုက်ဆံပေးပြီး အစားအသောက်တွေ (Food) ကို မင်းဝယ်လို့ရလိမ့်မယ်၊
စားချင်စိတ် (Appetite) ကို ဝယ်လို့မရဘူး။
2. ပိုက်ဆံပေးပြီး ဟာသတွေ (Fun) ကို မင်း ဝယ်လို့ရလိမ့်မယ်၊
ပျော်ရွှင်ခြင်း (Joy) ကို ဝယ်လို့မရဘူး။
3. ပိုက်ဆံပေးပြီး အပေါစားမိန်းမတွေ အများကြီး ကို မင်း ဝယ်နိုင်လိမ့်မယ်၊
မေတ္တာတရား (Love) ကို ဝယ်လို့မရဘူး။
4. ပိုက်ဆံပေးပြီး ဆေးဝါးပစ္စည်းတွေ (Medicine) ကို မင်းဝယ်လို့ရလိမ့်မယ်၊
ကျန်းမာခြင်း (Health) ကို ဝယ်လို့မရဘူး။
5. ပိုက်ဆံပေးပြီး စာအုပ်တွေ အများကြီး (Books) ကို
မင်းဝယ်လို့ရလိမ့်မယ်၊ အသိပညာ (Knowledge) ကို ဝယ်လို့မရဘူး။
6. ပိုက်ဆံပေးပြီး အိမ် ဆိုတဲ့ အဆောက်အဦး (House) ကို မင်းဝယ်လို့ရလိမ့်မယ်၊
ကိုယ့်မြေ ကိုယ့်ရေနဲ့ ရှင်သန်ရာ ဘဝ အိမ် (Home) ကို ဝယ်လို့မရဘူး။
7. ပိုက်ဆံပေးပြီး အိပ်ယာ အကောင်းစားတွေ (Bed) ကို မင်းဝယ်နိုင်လိမ့်မယ်၊
ချိုမြိန်စွာ အိပ်စက်ခြင်း (Sleep) ကို ဝယ်လို့မရဘူး။
8. ပိုက်ဆံပေးပြီး အရေးပါတဲ့ နေရာတစ်နေရာ (Position) ကို မင်းဝယ်လို့ရလိမ့်မယ်၊
လေးစားမှု (Respect) ကို ဝယ်လို့မရဘူး။
9. ပိုက်ဆံပေးပြီး ဖိတ်ဖိတ်တောက်နေတဲ့ အဖိုးတန် ပစ္စည်းတွေ (Glitter)ကို မင်းဝယ်လို့ရလိမ့်မယ်၊
လှပ တင့်တယ်မှု (Beauty) ကို ဝယ်လို့မရဘူး။
10. ပိုက်ဆံပေးပြီး နာရီ (Clock) ကို မင်း ဝယ်လို့ရလိမ့်မယ်၊
အချိန် (Time) ကို ဝယ်လို့မရဘူး။
11. ပိုက်ဆံပေးပြီး ဂြိုဟ်တုတစ်လုံး (Satellite) ကို မင်း ဝယ်လို့ရလိမ့်မယ်၊
နည်းပညာ (Technique) ကို ဝယ်လို့မရဘူး။
12. ငွေကြောင့် အသိအကျွမ်းတွေ အများကြီး (Acquaintances) မင်း ဖန်တီးနိုင်လိမ့်မယ်၊
မိတ်ဆွေစစ်တွေ (Friends) ကို ဝယ်လို့မရဘူး။
13. ငွေကြောင့် အချွေအရံတွေ အများကြီး (Servant) မင်း ထားနိုင်လိမ့်မယ်။
သစ္စာရှိမှု (Faithfulness) ကို ဝယ်လို့မရဘူး။
14. အနားယူချိန်တွေ၊ အားလပ်ချိန်တွေ (Leisure) ကို မင်း ဝယ်လို့ရချင် ရလိမ့်မယ်။
ငြိမ်းချမ်းခြင်း (Peace) ကို ဝယ်လို့မရဘူး။
15. အဖြစ်ပျက် ဟောင်းတွေကိုသတိမရအောင် ခေတ်သစ် တစ်ခု (New Age) ကို မင်း ဝယ်နိုင်လိမ့်မယ်၊
လုံးဝ မေ့ပျောက်ခြင်း (forgets) ကို ဝယ်လို့မရဘူး။
16. ငွေပုံပေးပြီး လူသတ်ခိုင်းလို့ရတယ်၊
အသက်တစ်ချောင်းကို ငွေပုံပေးပြီး ပြန်ရှင်အောင်လုပ်လို့မရဘူး။
17. ငွေပုံပေးပြီး အရှက်ကွဲအောင် လုပ်လို့ရတယ်၊
အရှက်တကွဲ အကျိုးနည်း ဖြစ်သွားပြီးရင်တော့ ငွေပုံပေးပြီး သိက္ခာဆည်လို့မရဘူး။
18. ငွေပုံပေးပြီး မလုပ်ဖြစ်အောင် မင်း တားနိုင်လိမ့်မယ်၊
လုပ်ပြီးသွားရင်တော့ ပကတိအတိုင်းဖြစ်အောင် ပြန်ကာလို့မရဘူး။
19. ငွေပုံပေးပြီး အကောင်းပြောခိုင်းလို့ ရလိမ့်မယ်၊
Posted by ကိုမျိုး at 4:37 PM No comments: Links to this post
ရှောင်ကြဉ်သင့်သော အချက်(၇)ချက်ကို ကျန်းမာရေးအသိရှိစေရန်
ထမင်းစားပြီးသစ်သီးများကို ချက်ချင်းစားခြင်းသည် အစာအိမ်
လေခံစေသည်။ ထို့ကြောင့် သစ်သီးများ စားသုံးမည်ဆိုပါက
နှစ်အထိ အသက်ရှည်ရှည်နေရမည် ဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုကြသည်ကို
Posted by ကိုမျိုး at 4:28 PM No comments: Links to this post
ပျော်စရာကောင်းသည့် ခိုင်မြဲသောအိမ်ထောင်တစ်ခု ဖြစ်ရန်အတွက်
နှစ်ဦးစလုံးတွင် တာဝန်ရှိပါသည်။ ခင်ပွန်းသည်အမျိုးသားများသည် အောက်ပါ
အချက်များကို မပြုလုပ်မိရန် အရေးကြီးပါသည် -
(က) အမိန့်ပေးသကဲ့သို့ အမြဲပြောဆိုဆက်ဆံခြင်း။
(ခ) ဆေးလိပ်ပြာများကို အိမ်အနှံ့ကြမ်းပြင်၊ ခုံ၊ စားပွဲများအပေါ်သို့ စည်း
(ဂ) ကြိုတင်မပြောဘဲ အိမ်သို့ တစ်ဦးတစ်ယောက်အား ထမင်းစားခေါ်လာ
(ဃ) မိမိဇနီးပြောနေသော အကြောင်းအရာတစ်ခု မပြီးဆုံးမီ မိမိပြောလိုသည့်
(င) အခြားသူများရှေ့တွင် မိမိ၏ဇနီးကို ဝေဖန်ပြောဆိုခြင်း။
(စ) မိမိဇနီး၏ ချက်ပြုတ်မှုကို အခြားသူ၏ ဇနီးများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပြောဆိုအပြစ်
(ဆ) ဇနီးသည် တန်ဖိုးထားမှုများကို မလေးစားခြင်း။
(ဇ) လက်ထပ်သည့်နေ့ရက်ကို အမှတ်မထားခြင်း။
(ဈ) ပစ္စည်းများကို နေသားတကျ ပြန်မထားဘဲ လက်လွတ်စပယ်ထားခြင်း။
ဇနီးသည်ကလည်း အောက်ပါအချက်များကို မပြုလုပ်မိရန် သတိထား
(က) လက်ကြောတင်းအောင် အလုပ်မလုပ်ဘဲမင်းသမီးကဲ့သို့နေထိုင်ခြင်း
နှင့်အခြားသူကို တစ်ချိန်လုံး အပြစ်ရှာပြောဆိုခြင်း။
(ခ) အတင်းအဖျင်းပြောဆိုခြင်း။ အခြားသူ၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ လုပ်ငန်း
ဆိုင်ရာ ကိစ္စများကို အတင်းပြောဆိုခြင်း။
(ဃ) သပ်ရပ်စွာ ၀တ်စားဆင်ယင် ထုံးဖွဲ့မှုမရှိခြင်း။
(င) ခင်ပွန်းသည် စကားပြောစဉ် စကားပြီးသည်အထိ မစောင့်ဆိုင်းဘဲဖြတ်
(စ) မိမိ၏ ကလေးများအကြောင်းသာ အစဉ်အမြဲ ရှေ့တန်းတင်ပြောဆိုနေ
(ဆ) မိမိ၏ ဆွေမျိုးများကို အိမ်လုံးပြည့် အမြဲခေါ်ထားခြင်း။ မိခင်အိမ်သို့ မ
(ဇ) ခင်ပွန်းသည်၏ သူငယ်ချင်းများကို မနာလိုခြင်း။ လုပ်ငန်းခွင်တွင် သုံးရ
သော အချိန်များကို မကျေမနပ်ဖြစ်ခြင်း။
(ဈ) ခင်ပွန်းသည်ကို အသိမပေးဘဲ သာရေး/နာရေးကိစ္စများ သွားခြင်း။
(ည) ဇနီးသည်မှာ ၀န်ထမ်းမဟုတ်သဖြင့် လက်အောက်ဝန်ထမ်းများကို အမိန့်
ပေးစေခိုင်ခြင်းမပြုရပါ။ အမိန့်တစ်ခုသည် ၎င်း၏ ခင်ပွန်း၏ အမိန့်သာ
(ဋ) အခမ်းအနား တွင်လွန်ကျွံစွာ ၀တ်စားဆင်ယင်မှုမျိုး ပြုလုပ်ခြင်း။
ခင်ပွန်းနှင့်ဇနီးသည် တစ်ဦးကိုတစ်ဦး အပြန်အလှန် လေးစားရပါ
မည်။ တစ်ဦးကိုတစ်ဦး သေးသိမ်အောင် မည်သည့်အခါမျှ မပြုလုပ်ရ။ တစ်ဦး
နှင့်တစ်ဦး ပြေလည်မှုမရှိသည့် အခါများတွင်လည်း နှစ်ဦးတည်းရှိနေချိန်တွင်
သာ ဖြေရှင်းသင့်ပါသည်။ ကလေးများ၊ လက်အောက်ဝန်ထမ်းများ၏ အရှေ့
တွင် ကတောက်ကဆ မဖြစ်သင့်ပေ။ ခင်ပွန်နှင့်ဇနီး နှစ်ဦးလုံးသည် အိမ်ထောင်
မပြုကြမီ အချိန်အခါတုန်းက ကဲ့သို့ပင် သပ်ရပ်စွာ ၀တ်စားဆင်ယင် နေထိုင်
သင့်ပါသည်။ အိမ်ထောင်ရှင်များ ဖစ်သွားသည်နှင့်ကပိုကရိုဝတ်စားနေထိုင်
Posted by ကိုမျိုး at 2:23 PM No comments: Links to this post
METRIC စံနစ် ENGLISH စံနစ်
10 မီလီမီတာ(mm) = 1 စင်တီမီတာ(cm)4လက်မ = 1 မိုက် (hand)
10 စင်တီမီတာ = 1 ဒက်ဆီမီတာ(dm) 12 လက်မ = 1 ပေ (ft)
10 ဒက်ဆီမီတာ = 1 မီတာ(m)3ပေ = 1 ကိုက် (yd)
10 မီတာ = 1 ဒက်ကာမီတာ(Dm) 22 ကိုက် = 1 သံကြိုး (ch)
10 ဒက်ကာမီတာ = 1 ဟက်တိုမီတာ(Hm) 10 သံကြိုး = 1 ဖာလုံ (flr)
10 ဟက်တိုမီတာ = 1 ကီလိုမီတာ(Km) 8 ဖာလုံ = 1 မိုင် (M)
10 ကီလိုမီတာ = 1 မီရီယာမီတာ(Mm)3မိုင် = 1 လီဂဲ
100 မီရီယာမီတာ = 1 မက်ဂါမီတာ 5280 ပေ = 1 မိုင်
1760 ကိုက် = 1 မိုင်
6860 ပေ = 1 မိုင် (ရေမိုင်)
1 cm(စင်တီမီတာ) = 0.3937 in (လက်မ) = 0.0328 FTS (ပေ)
1 m(မီတာ) = 39.37 in = 1.0936 YDS
1 KILOMETER = 0.6217 MILES = 3280 FTS
0.001 in = 0.025 mm
စင်တီမီတာ -------- လက်မ х 0.39
မီတာ -------- ပေ х 3.281
Posted by ကိုမျိုး at 1:40 PM2comments: Links to this post
MEGA သည်အကြိမ်တစ်သန်း DECI သည်ဆယ်စိတ် 0.1
KILO သည်အကြိမ်တစ်ထောင် CENTI သည်ရာစိတ် 0.01
HECTO သည်အကြိမ်တစ်ရာ MILLI သည်ထောင်စိတ် 0.001
DEKA သည်အကြိမ်တစ်ဆယ် MICRO သည်သန်းစိတ် 0.00001
၂- ရွေးကလေး = ၁ ရွေးကြီး
၄- ရွေးကြီး = ၁ ပဲသား
၂-ပဲသား = ၁ မူး
၂-မူးသား = ၁ မတ်
၂-မတ် = ၁ ငါးမူး
၂-ငါးမူး = ၁ ကျပ်
၂-ငါးမူး = ၁၆ ပဲသား
ကျပ် ၁၀၀ = ၁ ပိဿာ
၁ ပိဿာ = ၃.၆ ပေါင်
၁ ပိဿာ = ၁.၆၃၂၉၃၃ ကီလိုဂရမ်
၁ ကျပ်သား = ၀.၅၇၆ အောင်စ
Posted by ကိုမျိုး at 6:03 PM No comments: Links to this post
ပါဠိစာလုံးဆင့် များဖတ်တတ်စေရန် ရည်ရွယ်လျက်
၁။ နှစ်လုံးဆင့်မှာ၊ အထက်သာ၊ သတ်ပါမြဲဧကန်၊
၂။ သဝေလည်းထိုး၊ တ - သတ်မျိုး၊
ဖတ်ရိုး စ - သတ်သံ၊
၃။ သဝေလည်းထိုး၊ န- သတ်မျိုး၊
ဖတ်ရိုး င - သတ်သံ၊
၄။ သဝေရေးချ၊ သတ်မြင်က၊
မှတ်ကြ ၀ - ဆွဲသံ၊
၅။ ဟထိုး ၀ဆွဲ၊ ရရစ် ယပင်း၊ တွေ့လျင်းက၊
နှစ်ဝတာဝန်၊ ကျေပွန် စေရန်၊
အသံ အသတ် ယူမြဲမှတ်။
၁။ အဓိပ္ပာယ်မှာ---အက္ခရာ ၂- လုံးဆင့်တွေ့လျှင် အပေါ်တွင်ရှိသော အထက်အက္ခရာကို အသတ်တင်
၍ဖတ်၊ အသံသေပြီ၊ ရှေ့အက္ခရာ နှင့်တွဲ၍ ဖတ်ရမည်။
ဥပမာ---သမန္တာ = သမန်တာ
၂။ အဓိပ္ပာယ်မှာ---သဝေထိုးနှင့်တွဲသော တ - သတ်ကို စသတ် အသံ ထွက်၍ ဖတ်ရမည်။
ဥပမာ---မေတ္တာ = မေတ်တာ(မစ်တာ ဟုဖတ်)
(မှတ်ချက် ။ ။ သဝေထိုးကို ပါဠိ၌ ဧ - သရဟု ခေါ်သည်။)
၃။ အဓိပ္ပာယ်မှာ---သဝေထိုးနှင့်တွဲသော န - သတ်ကို င သတ် အသံ ထွက်၍ဖတ်ရမည်။
ဥပမာ---ပူရေ န္တံ = ပူရေန်တံ(ပူရင်တံ ဟုဖတ်)
၄။ အဓိပ္ပာယ်မှာ---သဝေထိုးရေးချကို ၀ဆွဲသံထွက်၍ ဖတ်ရမည်။
ဥပမာ---ဟောန္တု = ဟောန်တု(ဟွန်တုဟုဖတ်)
(မှတ်ချက် ။ ။ သဝေထိုးရေးချကို ပါဠိ၌ သြ - သရဟုခေါ်သည်။)
၅။ အဓိပ္ပာယ်မှာ---ဟထိုး ၀ဆွဲ ရရစ် ယပင့် အက္ခရာစာလုံးများနှင့် တွဲသော အက္ခရာသည် အသတ်တာဝန်
ကိုလည်း ယူရသည်၊ မိမိ၏ မူလဗျည်းအသံလည်း ထွက်ရသည်။
ဥပမာ--- အမှ = အမ်မှ
ဤပြယုဂ်တို့၌ ဟထိုးနှင့်တွဲသော မ၊ ဏ၊ န - အက္ခရာတို့သည် အသတ်တာဝန်ကိုလည်း ယူရသည်၊ မိ
မိ၏ မူလဗျည်းအသံလည်း ထွက်ရမည်၊ အသတ်နှင့်အသံတာဝန် ၂ - မျိုးကို ယူထားသည်။
သကျ = သက်ကျ
ဤပြယုဂ်တို့၌ ယပင့်နှင့်တွဲသော ကနှင့်သတို့သည် အသတ်နှင့် အသံတာဝန် ၂ - မျိုးကိုယူထားသည်။
စကြာ = စက်ကြာ
ဤပြယုဂ်တို့ ၌ရရစ်နှင့်တွဲသော ကနှင့်တ အက္ခရာတို့သည် အသတ်နှင့် အသံတာဝန် ၂ - မျိုးကိုယူထား
ကတွာ = ကတ်တ၀ါ
ဤပြယုဂ်တို့၌ ၀ - ဆွဲနှင့်တွဲသော တ - အက္ခရာတို့သည် အသတ်နှင့် အသံတာဝန် ၂ - မျိုးကို ယူထား
(မှတ်ချက် ။ ။ ဟထိုးသည် ဟ ၊ ယပင့်သည် ယ၊ ရရစ် သည် ရကောက် ၊ ၀ဆွဲသည် ၀ - အက္ခရာ၏ကိုယ်